Imithandazo enamandla yokufumana imisebenzi engxamisekileyo. ?
Imithandazo enamandla yokufumana imisebenzi engxamisekileyo. "Ndidinga umsebenzi ngokungxamisekileyo" Ndifuna ukufumana umsebenzi ngokukhawuleza. "
Kuyaziwa ukuba iingelosi ezigada ziyasikhusela ekwenzakaleni. Ezi zidalwa zasezulwini zikwicala lethu ngamaxesha okonwaba nokudakumba, kwaye zinokuvela kwiimeko ezahlukeneyo zobomi bethu.
Ke ngoko, ukuba udlula kwimeko enobuchule kwindawo efanelekileyo, ungathandabuzi ukubabiza: le yeyona ndlela inzulu yonxibelelwano noThixo.
Ngaba uphelelwe lixesha? Mamela ukuphindwa kwemithandazo enamandla ukufumana umsebenzi ongxamisekileyo esikulungiselele wona!
Sahlule ezimbini imithandazo enamandla yokufumana imisebenzi engxamisekileyo Ukukufumanela umsebenzi ongxamisekileyo kunye neendlela ezimbini zokubonisana, kodwa Nazi ezinye iindlela malunga nokubiza iNgelosi yakho yokuGcina:
Ukholo lubalulekile xa uthandaza
Cacisa isicelo sakho, kodwa ubonakalise ngentlonelo nangobubele
Emva koku-odola, qiniseka ukuba ukhanyisa ikhandlela kwingelosi yakho yokugada njengombulelo, nokuba umnqweno wakho awukamkelwa.
1 Imithandazo enamandla yokufumana imisebenzi engxamisekileyo
1.1 1. Umthandazo onamandla ngomsebenzi ongxamisekileyo
1.2 2. Umthandazo onamandla wokufuna umsebenzi ongxamisekileyo
1.3 3. Ububele bokufumanisa ukuba ubomi bakho bobuchwephesha buza kuba njani.
1.4 4. Ubuhlobo ngokufumana umsebenzi ongxamisekileyo.
1.5 Umthandazo we-Expedition eNgcwele ukuze ufumane umsebenzi
1. Umthandazo onamandla ngomsebenzi ongxamisekileyo
“Ingelosi eNgcwele, sithandwa sam kunye nengqalelo yam. Iqabane elithembekileyo elisindisayo. Ndiva lonke ukhuseleko olukuwe kwaye ndifuna ukuhamba nawe. Ndiyazi ukuba uyakhanyiselwa nguThixo.
Ndicela undincedise ngalomthandazo ukufumana umsebenzi ngokungxamisekileyo. Uyisidima sam, ndihlala ndifuna ukuhamba nawe, ndikhangela wonke umntu ngenkangeleko yothando, ndisasaza iintsikelelo novuyo.
Mhlobo othandekayo kunye neqabane, ndixhase ngeli xesha linzima, ndikhusele namhlanje kwaye uhlala. Amen.
2. Umthandazo onamandla wokufuna umsebenzi ongxamisekileyo
“Ingelosi yomlindi, mhlobo wam, kwasesizalweni. Ukhule kunye nam, uncike kwiingxaki zam kwaye uyawa. Ndiyabulela ngokuba nam xa ndandihamba kwiimeko ezinzima. Ndiyathemba ukuba uneminyaka emininzi yobomi ukukwazi ukukunika imithandazo yonke imihla: Umkhuseli wam onomona, ukuba undiphathise ubuThixo, ndiyakucela ngokukhawuleza ukuba undincede ufumane umsebenzi. Amen
Imithandazo inokukunceda nakwindlela osebenza ngayo ebomini. Apha unokufumana imithandazo eyahlukeneyo eya kukunceda woyise ubunzima.
Ukufumana ingqesho yinkxalabo enkulu kwezi ntsuku, kodwa kufuneka sazi ukuba ngamanye amaxesha lixesha lokuba sivale umjikelo kwaye siqhubeke, sikhangele amanye amathuba, njengoko kusenokubothusa. Ukuze simthobe, sineengcebiso ezimbini ezinomdla kakhulu: uvelwano olunye
fumana umsebenzi okhawulezileyo kunye nomnye ukufumana ukuba ubomi bakho obucokisekileyo buya kuba njani kunyaka omtsha. Kwenze ngokulandelelana kwaye ulandele amaphupha akho!
3. Ububele bokufumanisa ukuba ubomi bakho bobuchwephesha buza kuba njani.
Le ngcebiso ivela kwingcali yethu uJorge Purgly, osebenza ngokubala, amasiko kunye nokufunda itotot.
Thatha ikhandlela emhlophe yohlobo kwaye ubhale kulo igama lakho elipheleleyo kunye nomhla wokuzalwa. Yikhanyisele kwaye unikele ingqalelo kwilangatye.
Ukuba ikhandlela litshisa ngokufanelekileyo, luphawu lokuchuma kunye nempumelelo emsebenzini omtsha.
Ukuba ikhandlela liphuma, libonisa utshintsho lomsebenzi.
Ukuba uyakhala, oko kukuthi, ukuba i-wax iwela kwicala lakho, oko kuthetha ukuba ikhosi yengqesho iya kuba nzima ngakumbi kwaye kuya kuba yimfuneko ukuhambelana nomphathi wakho.
4. Ubuhlobo ngokufumana umsebenzi ongxamisekileyo.
Ukuba awusebenzi okanye kufuneka utshintshe imisebenzi, oluvelwano alunakusilela. Zahlule kwezi zinto zilandelayo:
Amakhandlela amabini amhlophe
Isitshixo okanye izinyo
Ungayenza njani le nto yokubonisa uvelwano ukufumana umsebenzi:
Kwelinye lamakhandlela bhala igama lakho elipheleleyo ngemela. Kwelinye icala, bhala: "Ndidinga umsebenzi." Bopha nganye nganye ngomgca oluhlaza amatyeli amathathu, ushiye iqhina elinye phezulu, elinye lisembindini kwaye elokugqibela lingezantsi.
Beka amakhandlela ecaleni komnye nomnye, kunye negama lakhe elibhaliweyo kufuneka libekhohlo kwaye elinye libinzana ngasekunene.
Khanyisa zombini, kwaye njengoko zivutha, thandaza San expedito, ingcwele yezizathu ezingxamisekileyo, ngokholo olukhulu.
Umthandazo we-Expedition eNgcwele ukuze ufumane umsebenzi
«Ingcwele yam ikhawulezisa izizathu ezinobulungisa nezingxamisekileyo,
Ndincede kweli lixa lokubandezeleka nokudinwa, ndithethelele kwiNkosi yethu uYesu Krestu.
Wena uyiNgcwele wabaxhwalekileyo.
Nguwe oyiNgcwele weXholo,
Wena ungcwele wezinto ezingxamisekileyo,
Ndikhusele, ndincede, undinike amandla, isibindi kunye nokuqina.
Ndasabela kwisicelo sam (buza ubabalwe)
Ndincede ndoyise la maxesha anzima, ndikhusele kuyo nantoni na enokuthi indenzakalise, khusela usapho lwam, uphendule kwisicelo sam ngokungxamisekileyo.
Ndinike uxolo ndathula.
Ndiyabulela kubo bonke ubomi bam kwaye ndiya kuthatha igama lakho kubo bonke abanokholo.
Ngcwele Expedite, sithandazele. Amen
Yenza le mfesane yokufumana umsebenzi kukholo olukhulu kwaye ubone isicelo sakho sizalisekisiwe!
USanto Expedito akayona "ingcwele yemisebenzi" Ungcwele wezizathu ezifanelekileyo nezingxamisekileyo. Kodwa ungathandaza u umthandazo kuSanta Joseph uMsebenzi, uMqeshi wabangaphangeliyo kunye nabasebenzi.